သုံးတတ်လျှင် ဆေးဖြစ်ပါသတဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သုံးတတ်လျှင် ဆေးဖြစ်ပါသတဲ့
Posted by Mr. MarGa on Feb 9, 2013 in Creative Writing, Opinion - Op-ed | 28 comments
အခုတစ်လောမှာ အစိုးရပိုင်းက အပြောင်းအလဲတွေ အတော်များများကို တွေ့လာရတယ်။
အပြောင်းအလဲ ဆိုရာမှာ ကောင်းတဲ့ဘက်ကို ပြောင်းတာတွေ့ရသလို အဆိုးဘက်ကို တစ်ခါတစ်လေရောက်သွားတာတွေကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။
အကောင်းဘက်က အပြောင်းအလဲပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆိုးဘက်က အပြောင်းအလဲပဲဖြစ်ဖြစ် အကုန်လုံးကို ပြည်သူတွေ(အတော်များများ) က အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ သိနေရပါပြီ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ သတင်းစာ နေ့စဉ်ဖတ်မှ၊ ဂျာနယ် အပတ်စဉ်ယူမှ သတင်းတွေကို သိရတာ မဟုတ်တော့ပါဘူး
တိုးတက်လာတဲ့ လူမှုရေးဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ၊ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ သတင်းထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့ သတင်းဌာနတွေ၊ရေဒီယိုတွေ ကြောင့် သတင်းအတော်များများကို သိနေကြပါပြီ။
ဒီအခြေအနေမျိုးဟာ နိုင်ငံအတော်များများမှာ တွေ့နေရပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဖြစ်လာတာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ တစ်နှစ်၊တစ်နှစ်ကျော်ကျော်ဝန်းကျင်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ facebook ကို လူတွေ ပိုသုံးလာတာနဲ့အမျှ ပြောင်းလဲလာတဲ့ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေ၊ သတင်းတင်ပြပုံတွေ ဝေဖန်ချက်တွေဟာ အခုဆိုရင် အချိန်မဆိုင်းဘဲ တွေ့မြင်နေရပါပြီ။
ထွက်သမျှ ဂျာနယ်တွေကလဲ facebook ပေါ်မှာ fan page တွေ ကိုယ်စီဆောက်လို့ သတင်းတွေကို တင်ပြလာတာတွေလဲ တွေ့ရတယ်။
အစိုးရဘက်ကလဲ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေက facebook page မှာပဲ တင်ပြချက်တွေ ဆွေးနွေးချက်တွေကို တင်လာကြတာတွေ ရှိပါတယ်။
ထို့အတူပဲ facebook ပေါ်မှာတင် ရုံးထိုင်နေကြတဲ့ သတင်းဌာန အများအပြားကလဲ သုံးသပ်ချက်တွေ ပေါ်ထွက်လာတတ်ပါသေးတယ်။
အဲဒီတော့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက တာဝန်ရှိသူတွေ တစ်ခုခု အံအားသင့်စရာတွေ လုပ်ပြလိုက်တာနဲ့ သတင်းဝေဖန်ချက်၊ ထင်မြင်ချက်တွေဟာ facebook ပေါ်မှာ ပလူပျံသွားတတ်ပါတယ်။
ဒါကိုကြည့်ရင် သတင်းလွပ်လပ်ခွင့်တွေဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပိုပြီးတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလာတယ်ဆိုတာ သိနိုင်တယ်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိလာတာနဲ့အမျှ နာမည်ကျော်တွေရဲ့ အတွင်းရေးသတင်းတွေလဲ ထွက်လာတတ်သလို သတင်းမှားတွေလဲ ထွက်လာတတ်ပါတယ်။
ထွက်လာသမျှ သတင်းတွေကို ဝေဖန်ချက်တွေ ထိုင်ရေး၊ သုံးသပ်ချက်တွေ ထုတ်လာကြတာကတော့ ပြည်သူတွေပါပဲ။ တက်လာတဲ့သတင်းအပေါ်မှာ မူတည်လို့ comment ပေးကာ မှတ်ချက်ပြုတာတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာ မှတ်သားစဖွယ်တွေတောင် ပါတတ်ကြသေးတယ်။
သတင်းတစ်ခု မှားသည်ဖြစ်စေ မှန်သည်ဖြစ်စေ သတင်းထူးနေတယ်ဆိုရင် share လုပ်လို့ နီးစပ်သူတွေဆီကို ဖြန့်ဝေလာကြပါတယ်။ ဖြန့်ဝေရုံတင်မကဘူး တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်လေးပါ ထည့်ပေးလိုက်ကြတတ်သေးတယ်။
အင်းပေါ့လေ သတင်းခေတ် ဆိုတော့လဲ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ လုပ်ရပေမပေါ့။
အဲဒီမှာ ဘာတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ တစ်ခါတစ်လေမှာ သတင်းမှားတွေ အလကားသက်သက် နာမည်ကြီးသွားတတ်သလို ၊ ဝေဖန်တာ လက်လွန်သွားရင်လဲ လွှတ်တော်ထိတောင် တက်သွားတတ်ပါလေရော။
ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကူးပြောင်းတာ နှစ်နှစ်ခန့်ပဲ ရှိသေးတာကြောင့် အရင်အစိုးရလက်ထက်က အကျင့်တွေမပျောက်သေးတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေ၊ ဝန်ကြီးတွေရဲ့ ဒေါမာန်ပါတဲ့ စေတနာစကားတွေဟာလဲ facebook ပေါ် ရောက်သွားတတ်ပြီး မကျေနပ်မှုတွေ ဖြစ်လာတတ်သေးတယ်။
ပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ facebook ဟာ သတင်းအစုံလင်ဆုံးနေရာတစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကို အင်တာနက်လိုင်း ချပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ လူတိုင်းနီးပါး အင်တာနက်သုံးဖို့ အဆင်ပြေသွားကြတယ်။
အဲဒီ ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက် သုံးတဲ့သူတွေကလဲ google search သာ မသုံးရင်နေမယ် facebook account တော့ လူတိုင်းနီးပါး ရှိကြသဗျ။
အဲဒီတော့ သတင်းတစ်ခု အင်တာနက်မှာ ပျံ့ပြီဆိုတာနဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်တွေကို အချိန်မဆိုင်း သိလာရတတ်တယ်။
ဒီအချက်ကို အခြေခံပြီးတော့ ပြည်သူတွေဆီက အသံတွေကို ကြားရနိုင်သလို၊ ပြည်သူတွေကို အသိပေးချင်ရင်လဲ ပိုပြီး လွယ်ကူလာတယ်။
တစ်ဖက်က ကြည့်ပြန်ရင်လဲ ပြည်သူတွေကို လှုံ့ဆော်သွေးထိုးပေးဖို့ အရမ်းလွယ်တဲ့ အနေအထားကို ရောက်နေပြန်တယ်။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အစိုးရပိုင်းက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်စကားကိုယ် တာဝန်ယူလို့ ပညာသားပါပါ ပါးပါးနပ်နပ် ပြောကြားသင့်သလို သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဘက်ကလဲ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ပြန်လည်ဖြေရှင်းပါမှ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်မလာအောင် တားဆီးနိုင်မယ်လို့တွေးမိပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သတင်းတစ်ခု၊ အပြုအမူတစ်ခုဟာ လူထုအုံကြွမှုတွေ၊ စစ်ပွဲတွေအထိတောင် ရောက်သွားတတ်လို့ပါပဲ။
facebook ဟာ တကယ်လို့ အကျိုးရှိရှိသာ အသုံးချမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အထောက်အကူ ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ စနစ်ဟောင်းကအတိုင်းသာ သူများအပေါ်ကို အပြစ်လွှဲလို့ ကိုယ်က ခေါင်းရှောင်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ကြောင်းတောင် ပြန်လှည့်သွားနိုင်မလား မသိတာမို့
ကြည့်ကျက်သာ စခန်းသွားကြပေတော့လို့သာ ပြောပါရစေတော့။
တစ်ခါတစ်လေမှာ ခေါင်းထဲကို ဖြတ်ဝင်လာတဲ့ အတွေးစလေးတွေကို ချရေးကြည့်မိတာပါ။ အက်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်နေရင်လဲ တောင်းပန်ပါတယ် လို့။
ကျုပ်ကတော့ ဖေ့စ်ဘုတ် မသုံးဘူးဗျ ..
သုံးလည်း မသုံးတတ်ဘူးရယ် ..
ခင်ဗျား ပြောမှ သုံးချင်စိတ် ပေါက်သွားတယ် ..
စမ်းတဝါးဝါး သုံးကြည့်လိုက်ဦးမှပါပဲ …….
ရှဲရှဲ …. သန်းကျူး …
မဟာရာဇာ အန်စာတုံးက ဖေ့စ်ဘုတ် မသုံးဘူးဆိုရင်
ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ တွေ့တဲ့သူက မဟာဘာဂျာ အန်ချာတုံးလားဟင်
အဲ့ဒါ ကျုပ် ကိုကြီးဗျ …
ကျုပ်က အငယ်ကောင် ….
သူဂ ဖေ့စ်ဘုတ် သုံးသလား မမေးပါနဲ့ဗျာ …
အားတိုင်း ယားတိုင်း အဲ့ဒါပဲ သုံးနေတတ်တာ …
ကျုပ်ကတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ထက် နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာတွေကိုပဲ
လိုက်ပြီး လေ့လာတတ်တဲ့ လူပါ …
ဟောဒီ ဂဇက်မှာပဲ ပျော်နေတတ်သူပေါ့ ခင်ဗျာ ….
သူက ဖေ့စ်ဘုတ် ဘက်ကို ဦးစားပေး သုံးတယ် ..
ကျုပ်က ဟောဒီ ဘက်ကို ဦးစားပေး သုံးတယ် …
အဖြစ်က ဒီလိုပေါ့ဗျာ … ခင်ဗျား ဒါကို မရိပ်မိဘူး ထင်တယ် …
တော်တော် ညံ့တဲ့ လူပဲ …..
ဦးမာဃက အသက်ကြီးလာတော့ အဲလောက် မစဉ်းစားတော့ဘူး
ဟို အစ်ကိုက ခပ်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်ပြီး
ဒီ ညီလေးကတော့ ခပ်မိုက်မိုက်လေး ဖြစ်မယ် ထင်တယ်နော်
နာက ကလေးချိတေးတော့ အာ့မျိုးတွေ နားလည်ဘူး နီလည်း အံချာတုန်းနဲ့ပေါင်းပြီး တောထွက်တော့မှာလား ဒါနဲ့ ဟိုအအေးဆိုင်က မိန်းမကြီးက နီ့ကိုမှာလိုက်တယ် နင်သောက်နေကျအအေးရပြီတဲ့ နောက်2နှစ်ဆိုရင် ရတော့ဘူးတဲ့ သူ့ကလေးမူကြိုပို့ရတော့မယ်ဆိုလားဘဲ
အဲဒါ သိကြားနဲ့ ဘာမှ ဆိုင်ဘူးလေ
သိကြားက ကိုယ့်ဟာကိုယ် နတ်သမီး တစ်ဖက်တစ်ထောင်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး နေ နေတာလေကွယ်
ဟာ … ဒီသဂျားနှယ် …
ပိုးစရာ ရှားလို့ ..
ဒီသဂျား .. ငရဲတော့ ကြီးတော့မှာပဲ …
နင့် ရှင်းလင်းချက် ဆိုတာ …
နာ မမြင်ဘူး .. မကြားဘူး .. မတွေ့ဘူး ..
သိကြားမင်း ပိုစ့်တော့ နာဒို့လုပ်တာနဲ့ ပျက်ပါပီ တနားပါဒယ်ဟယ်
ဒဂျားမင်းဂို တွားတနားရင် ခင်ဗျား တစ်ဖက်ငါးရားနေရာ ရောက်သွားမယ်နော…..
ဖေ့ဘုတ်ကိုတော့ ခုလောလောဆယ် စိတ်နာနေလို့ ၃ဗူးဗျ။
ပါ့စ်ဝါ့ဒ်သာ သေချာလေးမှတ်ထားပေါ့ဗျာ :hee:
fb က တစ်ဖက်တစ်လမ်းမဟုတ်ဘူး၊ အဓိကဇာတ်ဆောင်တောင်ဖြစ်နေပြီ
မီဒီယာထဲမှာ အရေးပါဆုံး အပြန့်နှံလွယ်ဆုံးလေ ဒါတွေထားပါတော့
ကျွန်တော် မကျေနပ်တာက ခီဗျားတို့က အဖေမာဃ၊ သားမာဃတင်မကဘူး။
အခု အစ်ကို အံစာ ညီအံစာပါပေါ်လာပြန်ပြီ တင်းတယ်နော်။
ကျုပ်က အငယ်ကောင် အံစာတုံး ပါ ….
အကောင့်ကတော့ တစ်ခုထဲပေါ့ဗျာ …
ဖေ့စ်ဘုတ် သုံးတဲ့ကောင်က ကျုပ်ကိုကြီးဗျ ….
သူနဲ့ ကျုပ်နဲ့က အမြွှာလည်း ဖြစ်၊ ရုပ်ချင်းလည်း ဆင်၊ လေသံကလည်း ဆင်နေတော့ ..
ခွဲလို့ အတော် ခက်သဗျ ….
ကျုပ် အကြောင်းလည်း ကိုကြီး သိ၊ ကိုကြီး အကြောင်းလည်း ကျုပ်က သိနေလေတော့ …
အကုန်လုံးက ကျုပ်တို့ကို တစ်ယောက်တည်းလို့ပဲ ထင်နေကြတာပေါ့ ခင်ဗျာ ….
ဟဲ …. ဟဲ ….
သားမာဃလေးက ဦးမာဃ မရှိတုန်း ခိုးဝင်သွားတာပါဗျာ
ဖေ့ဘုတ်ကတော့ သိတဲ့အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အတော်အရေးပါတဲ့ နေရာကို ရောက်လာသလိုပဲ
twitter ကိုတောင် မြန်မာတွေက သိပ်မသုံးကြဘူးဗျ
ဖေ့ဘုတ်ထောင်တဲ့ မာ့ဘာဆိုလား ၊ နာမည်မေ့နေ့ လို့ 
သူ့ ကျေးဇူးတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အများကြီး ရှိတယ်ကွဲ့ 
သူကတော့ အဲလောက် သိမှာ မဟုတ်ဘူးနော်
အင်းးး… ငါလည်း တစ်ခုခုသတင်းလေးများကြားရင် ဖွဘုတ်လေးတက်ကြည့်… ဒါမယ့် တက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုတော့ ချင့်ယုံရတာပေါ့လေ… နာ့မှာလည်း ဖွဘုတ်အကောင့်ချိဒယ်…
အားရပါးရ သုံးရအောင် ဖေ့ဘုတ် ၁၀ ခုလောက်ကို ဖွင့်သုံးပလိုက်မယ်။
ဘိုးခင်ခ။ ဖေဖေခင်ခ။ သားလေးခင်ခ။ အကိုခင်ခ။ ညီခင်ခ။ လေးခင်ခ။ ဦးကြီးခင်ခ။
ဦးဦးခင်ခ။ အဘခင်ခ။ ဦးခင်ခ။ အိုလို ဖေ့ဘုတ်တွေဖွင့်ပြီး သုံးပြစ်လိုက်မယ် ဦးမာဃ ရေ။
လေဒီခင်ခ၊ မဒမ်ခင်ခ၊ ခင်ခ ဖမ်မလီ ဆိုတာတွေပါ ဖွင့်ပလိုက်ဗျာ
ဂွ တော့ကျပြီ ။
ခုပဲ ဖွဘုတ်က သတင်းအကြောင်းပြုပြီး ရေးခဲ့တာ …
သဂျီးပြောသလို မတူသောအတွေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်စာပေါ့ဗျာ
ဦးဆာမိ တွေးတာနဲ့ ကျွန်တော် တွေးတာက ဆင်ပဲဆင်တာပါဗျာ
သုံးတတ်တယ်။ သုံးတတ်တယ်။ သကြားရဲ့
နာ က သုံးတတ်နွန်းနွံ့ ဖဘ အကောင့်တွေ များသထက်များပြီး ဘလော့သွားတဲ့သူတွေလည်း များသထက်များလာပြီ။
ခုတော့ အသစ် ဖွင့်စရာ မေး(လ) ကုန်နေလို့ ခဏ နားထားတယ်။
နိုင်ငံတဂါမှာ ဒီလိုပဲ သွားကြ ဆဲကြ ဆိုကြ ရေးဂျ သားဂျတာပဲ၊ မြန်မာပြည်တခုထဲ ထူးထွေ ပွေရှုပ်နေတယ် မထင် မထင်……….. တရုတ်ဂေါင်းဆောင်ကြီး တိန်ရှောက်ကြောင် ပြောခဲ့ဖူးတယ် တံခါးဖွင့်လိုက်ရင် လေနုအေးနဲ့အတူ ဖုံအမှိုက်တွေလည်း ပါလာမှာ သဘာဝတဲ့။ ကိုယ့်လူတို့ ဒီအချိန်မှာ စစ်တပ်ဖက်ကလူတွေ လေသံမလိုက်မိဖို့ သတိထားကြပါ။ လောကမှာ ဘယ်အရာမှ ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာ မရှိရေးချမရှိ…..
ခေတ်မီပြီလို့ ပြောရမလားပဲ နော်
ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးက ဒွန်တွဲနေတာကိုး
ကောင်းကျိုးများပြီး ဆိုးကျိုးနည်းအောင် လုပ်ရမှာပေ့ါဗျာ